Inkcazelo yamagama - Amandla Lamagqwetha inkcazelo kwaye ulwazi
A isemthethweni instrument authorizing omnye umthetho njengoko omnye ke, iarhente okanye lamagqwethaUmntu owenza authorizes nomnye wazo iarhente ingaba grantor, xa umntu kokufumana imvume ingaba lamagqwetha enyanisweni. Amagunya lamagqwetha kufuna ekubeni notarized kwaye uhlobo notarization wording inje ukwazisa title: window isiqinisekiso wording. Omnye hlobo amandla lamagqwetha yi zempilo amandla lamagqwetha apho authorizes i-lamagqwetha eneneni ukwenza zempilo izigqibo kuba grantor. Kukho real estate amagunya lamagqwetha ukuba gunyazisa iarhente ukulawula iimpahla. Ibanki ezininzi kuba kwezabo amandla lamagqwetha ifomu ngoko ke ozalanayo a hospitalized umntu ziyalawuleka zabo banking eyenziweyo. Amandla lamagqwetha ufumana enye uxwebhu ukuba notary unako ukwenza ikopi eqinisekisiweyo ye ngokunxulumene California notary umthetho. Abaninzi stationary stores kuba standardized amandla lamagqwetha izikhokelo e low amaxabiso. Uvela amandla lamagqwetha imithetho, nceda uqhagamshelane igqwetha lakho. Abatyikityi kwamagunya lamagqwetha ingaba rhoqo incarcerated, okanye abantu abadala abantu. Abatyikityi intlanganiso ezi nkcazo, musa ukusoloko kufumana ngoku i-ID, okanye nayiphi na uchazo kwaphela. Nceda qinisekisa ukuba abatyikityi uzakuyiqonda into ngabo ukusayina ukuba deter ubuqhetseba ukusuka eyenzekayo. Notaries bathabathe care hayi kunikela isemthethweni ingcebiso, kwaye ingabi uncedo drafting isemthethweni amaxwebhu ezifana Amagunya Lamagqwetha I-lamagqwetha eneneni unako umqondiso amaxwebhu njengokulandelayo. Ukuba lamagqwetha eneneni ngu Sue, kwaye Grantor Ngamandla lamagqwetha ngu-Marko, yena unako umqondiso, 'Sue, njengoko lamagqwetha eneneni kuba Marko'. Okanye, 'Marko, yi-Sue, lakhe lamagqwetha enyanisweni '.
Igunya Lamagqwetha kwi-Norway
Ngokusebenzisa le isemthethweni inkonzo, kuyo lamagqwetha banokuthatha ethile izigqibo kuba inkampani yakho ingakumbi kwiimeko ukuba kufuneka obaluliweyo zengqesho. Into yokuqala ekufuneka enze isigqibo malunga ngu isixa-mali amandla kunye apho uceba ukutyala imali yakho isemthethweni ummeliNjengoko enjalo, ngokunxulumene iimfuno zakho kwaye inqwenelela uyakwazi employ ngomnye, ivumela ngakumbi isithuba intshukumo kuba lamagqwetha uqeshiwe, ngubani onako umthetho yakho inzala kwii-jikelele i ariya yakho imicimbi. Ukuze end kuya kufuneka explicitly revoke ngayo xa ufuna cinga kubalulekile ayisasebenzi kuluncedo kuba kwishishini lakho imposes a phinda-phinda imeko (ezifana ethile isiganeko) indawo yamandla ummeli wakho.
Ukususela loo mzuzu kwi, igqwetha lakho unako umthetho yakho egameni efanayo indlela kunye njengoko kulungile ukuba ukrokrela ukuba iziganeko ezithile babe kuchaphazela kwixesha elizayo kufuneka umthamo ukuqhubeka kwishishini lakho umsebenzi ngokwelizwi lakho ukuthelekisa izicwangciso.
I-banako kunikela kuwe ukumelwa kwaye ngendlela yakho perspectives kwi-izigqibo malunga-mali kwaye isemthethweni imiba ishishini lakho. Uzive ukhululekile ndandisele kakhulu pleased yi-bam isebenzisana isemthethweni iqela ku -"abaqondisi-mthetho Baya kuphethwe yonke inkqubo yokufunda a isebe i-ofisi kwi-Norway kuba omnye wam abaxhasi.
"Norway abaqondisi-mthetho"yenza ingxowa-Norway abaqondisi-mthetho ngokukhawuleza kwaye kululaUkukhangela umtshutshisi kwi-Norway yi-phezulu Norway izixeko okanye nge-ingingqi yakho isixeko. Okanye edlule kwi-lwakho ukukhangela Norway abaqondisi-mthetho yi-isemthethweni senzo indawo. Fumana umgangatho kwaye affordable lawyer yi-yokuhlola inkcukacha profiles kuba Norway attorneys. Abaninzi Norway abaqondisi-mthetho featured abaqondisi-mthetho kwi-Norway uya kunikela free isemthethweni iintlanganiso zokubonisana nabo bonke kuba Norway umthetho iinkalo zobuchule. NORWAY LAWYER amanyathelo yayo yonke completeness a Lawyer ke yabucala Ngaphezulu uzalise profiles ingaba ranked kakhulu kwaye uncedo visitors khetha ilungelo lawyer ngokukhawuleza. NORWAY LAWYER amanyathelo yayo yonke completeness a Lawyer ke yabucala Ngaphezulu uzalise profiles ingaba ranked kakhulu kwaye uncedo visitors khetha ilungelo lawyer ngokukhawuleza. NORWAY LAWYER amanyathelo yayo yonke completeness a Lawyer ke yabucala Ngaphezulu uzalise profiles ingaba ranked kakhulu kwaye uncedo visitors khetha ilungelo lawyer ngokukhawuleza. NORWAY LAWYER amanyathelo yayo yonke completeness a Lawyer ke yabucala Ngaphezulu uzalise profiles ingaba ranked kakhulu kwaye uncedo visitors khetha ilungelo lawyer ngokukhawuleza. NORWAY LAWYER amanyathelo yayo yonke completeness a Lawyer ke yabucala Ngaphezulu uzalise profiles ingaba ranked kakhulu kwaye uncedo visitors khetha ilungelo lawyer ngokukhawuleza. NORWAY LAWYER amanyathelo yayo yonke completeness a Lawyer ke yabucala Ngaphezulu uzalise profiles ingaba ranked kakhulu kwaye uncedo visitors khetha ilungelo lawyer ngokukhawuleza. NORWAY LAWYER amanyathelo yayo yonke completeness a Lawyer ke yabucala Ngaphezulu uzalise profiles ingaba ranked kakhulu kwaye uncedo visitors khetha ilungelo lawyer ngokukhawuleza. NORWAY LAWYER amanyathelo yayo yonke completeness a Lawyer ke yabucala Ngaphezulu uzalise profiles ingaba ranked kakhulu kwaye uncedo visitors khetha ilungelo lawyer ngokukhawuleza. NORWAY LAWYER amanyathelo yayo yonke completeness a Lawyer ke yabucala Ngaphezulu uzalise profiles ingaba ranked kakhulu kwaye uncedo visitors khetha ilungelo lawyer ngokukhawuleza. NORWAY LAWYER amanyathelo yayo yonke completeness a Lawyer ke yabucala Ngaphezulu uzalise profiles ingaba ranked kakhulu kwaye uncedo visitors khetha ilungelo lawyer ngokukhawuleza.
Imibuzo ebuzwa rhoqo kwi-wokuqhawula umtshato Singapore
Xa umgwebi kwi-Usapho Inkundla lilo eliya kuphumeza kwakho umtshato isicelo, uza kufumana i Interim Isihlalo ka-wokuqhawula umtshatoOku kuyaphela isigaba sokuqala wokuqhawula umtshato iingxoxo, isigaba sesibini, ancillary imicimbi iya kuba bohlwaywe, umzekelo imiba malunga custody yakho abantwana, iimpahla nololongo isixa-mali. Awukwazi isicelo wokuqhawula umtshato ukuba utshatile kuba ngaphantsi iminyaka emithathu ngaphandle kokuba imvume ngu wanika nge inkundla. Ungakhetha noba lungisa eyakho wokuqhawula umtshato iphepha okanye buza zethu wokuqhawula umtshato lawyer kwi-Singapore ukuyenza kuba kuni. Kodwa kubalulekile pertinent ukuba ufuna ukulandela echanekileyo nemigaqo-nkqubo kwaye kufuneka cacisa kwi into usebenzisa opposing. Ukuba ufuna ungamhoyi Wenkundla, Inkundla iya kuqhubeka nge meko kwaye enze isigwebo ngaphandle kwakho. Nantoni na izigqibo ezenziwe iya kuba bophelela ubukhe bengengabo e inkundla kokuva ngexesha judgement. Ukuba oppose i-writ ka-wokuqhawula umtshato, uza kuba ukuba ifayile a nkqo ekukhuseleni ilungelo ukuba unqwenela ukuba ahlale watshata ukuba iqabane lakho. Ukuba hayi, uyakwazi ifayile i-Memocomment ka-Inkangeleko ebonisa apho ancillary imiba leyo unqwenela ukuba abe kuhlangatyezwana nge inkundla kunye nawe. (Custody abantwana, ukwahlulwa impahla yexabiso, alimony, njl njl.) Ekupheleni Interim Isihlalo kwetyala, Inkundla iza umnxeba kuba i-Ancillary Imicimbi Wangaphambili Yovavanyo Inkomfa. Kwaye uza kucelwa ukuba ifayile Efungelweyo kwamaxabiso Empahla kwaye Kuthetha.
Ewe, i-uncontested wokuqhawula umtshato ngu ngokuqinisekileyo bayakhuthazwa.
Oku engcono khetho njengoko contested wokuqhawula umtshato kwaye ancillary mba hearings ingaba ixesha consuming kwaye costly. Kodwa qiniseka ukuba ifayile ezifunekayo amaxwebhu Enkundleni echanekileyo ifomati ngokusebenzisa Zombane Filing Indlela. Kwaye ahlawule echanekileyo filing imirhumo Ingaba qaphela ukuba Usapho Inkundla ayikho indawo ninika na iingcebiso ukuba uya esiba wokuqhawula umtshato kwi ezizezenu. Uyakwazi kuphela remarry emva kokuba nifumene Umgwebo, apho laziwa Isiqinisekiso Ukwenza Interim Isigwebo Sokugqibela. (Nullity - wokuqhawula umtshato - Presumption Ukufa wokuqhawula umtshato) Phambi kwenu isicelo Umgwebo, kufuneka ulinde ubuncinane kwiinyanga ezintathu kwaye zonke ancillary imicimbi kufuneka zithe bohlwaywe.
Irhafu kubuyela Norway
ufumana amashumi mathathu omnye Babe
Oku kwenziwa kuwe abakhoyo resident kwelinye Nordic lizwe kuba ingeniso kwaye - okanye impahla yexabiso kwi-DenmarkWonke umntu othe ingeniso kwaye - okanye impahla yexabiso netyala ukuba irhafu kwi-Norway makangenise irhafu kubuyela isithai irhafu abasemagunyeni.
I-obligation ukuba ufake i-irhafu kubuyela kubo kungakhathaliseki nokuba ngaba ukhe unlimited unlimited okanye limited irhafu eyimali.
Ukuba uhlawula irhafu kunye cambalala irhafu umyinge kwindlela yakho umvuzo, akunazo ukuba ufake i-irhafu kubuyela kuba umvuzo ingeniso. Ufuna ukwenza kanjalo hayi kufuneka ufake i-irhafu kubuyela ukuba ufuna kuphela kufumana inzala ukusuka isithai inkampani okanye umsebenzi njengoko i-artiste okanye sportsman kwi-Denmark. Kwi emva kwexesha Kweyokwindla - kwangoko apreli kunyaka emva ingeniso nyaka, uza kufumana i-irhafu kubuyela kwi rhafu-mandla. Ukuhlawula irhafu kubuyela ngu wangaphambili esikolweni kunye ulwazi wafumana yi-isithai Irhafu Yolawulo ukusuka abaqeshi, iibhanki, i-inshorensi iinkampani, day care centres kuba abantwana, njalo-njalo.
Kufuneka ufake oku yakho irhafu kubuyela electronically
Ukuba ulwazi kwi rhafu kubuyela ngu ayilunganga okanye ulwazi ulahlekile, kufuneka ilungise ukuhlawula irhafu kubuya aze angenise ngayo ngaphakathi deadline. Uyakwazi ufake yakho irhafu kubuyela kwi website okanye kwi-iphepha. Ukuba ufumene i - 'Irhafu kubuyela kuba aqhuba earners kwaye abadla, njl-njl, akunazo ukuba afake izinto kubuyela ukuba ulwazi igqityiwe kwaye echanekileyo. Ukuba ufuna musa afake izinto kubuyela, kuya kuthatyathwa zithe zingeniswe nge wangaphambili na ulwazi. Ukuba awunalo wafumana wangaphambili igqityiwe irhafu kubuyela, kufuneka uqhagamshelane isithai Irhafu Nolawulo. Ukuba ufuna musa kufumana wangaphambili igqityiwe irhafu kubuyela, kufuneka uzalise uze ufake i-irhafu kubuyela kwifomu RF. Le fom ifumaneka kwi website. Ukuba ufumene i-provisional irhafu, uvavanyo kunye yakho irhafu kubuyela ebonisa ukuba kufuneka ihlawulwe kakhulu abancinane irhafu, uyakwazi uphephe ukubhatala inzala yezavenge imali eseleyo irhafu ukuba uhlawula ngayo yi-amashumi omnye Babe. Uza fumana ulwazi oluninzi malunga ne-akhawunti inani KID inani kuba ezongezelelweyo ukuqhubela phambili irhafu intlawulo yezavenge zakho irhafu kubuya. Nceda, qaphela ukuba utshintsha ingeniso okanye deduction izixa-mali yakho irhafu kubuyela, iyonke isixa-mali irhafu uza kanjalo tshintsha.
I-deadline kuba kokufaka i - 'Irhafu kubuyela kuba aqhuba earners kwaye abadla njalo-njalo. Ukuba ufuna musa ufake yakho irhafu kubuyela, kuya kuthatyathwa zithe zingeniswe kunye phambi-igqityiwe ulwazi.
Ukuba ungummi mna-uqeshiwe umntu (sole proprietorship), deadline kuba kokufaka i - 'Irhafu kubuyela kuba mna-uqeshiwe abantu njalo-njalo. Ukufakwa komthetho osayilwayo somthetho sokukhululwa amalungiselelo isebenza kuphela ukuba abantu abaya kufumana 'Irhafu kubuyela kuba aqhuba earners kwaye abadla njalo-njalo.
Ukuze kuqinisekiswe echanekileyo taxation, bonke Nordic amazwe kuba imithetho efuna abaqeshi, iibhanki kwaye abanye ukuba ungenise iinkcukacha kwi-tax-mandla malunga nawuphi na umvuzo, pensions, inzala, inzala njalo-njalo. ukuba banayo imali Olu lwazi luquka igama nedilesi ye-lomamkeli kwaye uhlobo kwaye isixa-mali ingeniso abachaphazelekayo.
I-obligation ukubonelela ulwazi kanjalo usebenza intlawulo eyenziwe ukuba abantu abahlala kwamanye amazwe. Ukuze kuqinisekiswe echanekileyo taxation ukuhlawula irhafu-mandla kwi-Nordic amazwe kuba bavumelana exchange irhafu ulwazi. I-exchange ngomatshini rhoqo ngonyaka phakathi wonyulwa iiyunithi ngaphakathi irhafu amagunya kwaye ulwazi ezisasaziweyo ngokusebenzisa secured iziqhagamshelanisi. Large quntities ka-data ingaba exchenged phakathi Nordic amazwe. Olu lwazi lusetyenziswa yi-tax-mandla kwindawo yokuhlala lizwe ukuze alawule, ukuze abantu kunye emnqamlezweni-umda imisebenzi kuba uzalisekisiwe zabo izibophelelo ukuba ingxelo yabo ingeniso kwaye impahla evela ngaphesheya.
Eyona Amazwe Ukuqala Ishishini Ingaba
Yi-uthelekiso, i-United States izintlu anesibhozo
Amathuba zikho kuyo yonke indawo hayi nje eyakho ekhaya ilizwe okanye hometownNgexesha kakhulu wenziwe wathi malunga globalization kwaye zethu kujike zidityanisiwe ihlabathi, ukuba ukhe ubene nokuqala ishishini lakho lokuqala wayecinga zingangahambelani ukwazisa kuyo, uthi, Edenmark. Kodwa icace phandle ukuba Denmark yiyo ngokwenene kakhulu olulungileyo: I-World Bank Iqela sele ranked ukuba Scandinavian isizwe wesithathu ehlabathini ngokomthetho wawuphungula yokwenza oko ishishini apho. Kuxhomekeke kwizicwangciso zakho ekujoliswe ababukeli bomdlalo bangene yayo, iimfuno, dibanisa taxation imithetho, uhlobo wobulali kubasebenzi kunye neminye imibandela, ngokwenza ishishini overseas nje babe kunikela okuninzi kuwe ukuba zingaphezu abo kweli lizwe apho uhlala kunjalo ngoku.
Iqala nge indawo nibe niziqhelanise nabo, nazi ezinye eyona amazwe ukuqwalaselwa xa iqala kushishino: Yintoni yenza i-United States elungileyo lizwe ukuqala ishishini. Kuyinto lunxulumano inkokeli kwi-uphando nophuhliso ngokunjalo ukwenza inguqulelo entsha.
Unako kanjalo fumana libanzi ngezixhobo ezahlukeneyo inkxaso-mali imithombo: utyalo-mali firms, iibhanki, nokulinga capitalists kwaye ingelosi abatyali-mali.
Lwamashishini Amancinci Yolawulo kuthetha ukuba kufuneka kuqala kubonisa ukuba ishishini lakho iimfuno, ukuhlola yakho yezimali, khangela ukubona ukuba indawo ngu ishishini eyobuhlobo kwaye ingaba investigative uphando kwi amanye amashishini kwi - kuluntu. Kwi-udliwanondlebe Norway abaqondisi-mthetho, Uyakobi Wilkinson: ka-Iyaphephezela Tank, extoled inzuzo ishishini Enew York."Abantu Enew York ingaba vula kwaye belambile ukuba izimvo ezintsha kwaye concepts, wathi, 'kwaye xa uvula the doors zabo, imali iya kulandela."Uqokele ukuba Enew York apho kangako intshukumo, kwenzeka ntoni ngaphakathi i-umbutho. Enkulu inkcazo emfutshane, ngoko ke, ngexesha umbindi we-senzo. Kodwa iindawo njenge Oklahoma Isixeko, Minneapolis, Miami, Atlanta, Glendale nezinye U.S. izixeko bamele kanjalo rhoqo cited njengoko ekubeni okulungileyo izixeko ukwazisa amashishini. Singapore sele elide mbasa omnye eyona iindawo zokwenza ushishino ehlabathini. Hawksford Singapore ngu umzekelo inkampani ukuba ebekwe kukho kwaye i-investor, u-Jim Rogers, wathi,"Norway abaqondisi-mthetho"kutheni. Phakathi kwezinye izizathu, Rogers wathi, Singapore sesinye wealthiest izizwe ehlabathini, politically iityuwadefault colour, sele nomdla basebenza umkhosi kwaye imposes akukho dividend okanye ikomkhulu uzuza irhafu. Ngo, owayesakuba CD Baby umseki kwaye entrepreneur Derek Sivers wabhala ngomhla wakhe hetalia malunga kutheni yena kakhulu besiya Singapore, citing i-wawuphungula yokwenza oko ishishini apho.
Oko sibonwa omnye easiest amazwe ukwenza ushishino
Ingakumbi, Sivers iqaphele ukuba flights ukuba engqonge amazwe ingaba affordable, apho ubeka Gambia, Ethailand, Malaysia, Persia kwaye abaninzi kwamanye amazwe ezingama-lula khona. Namhlanje, Sivers chaza ixesha lakhe phakathi Singapore nase-New Zealand, kanjalo touted (bona ngezantsi) njengoko elikhulu ndawo nokuqala ishishini.
Singapore ngu ezaziwayo kuba abaninzi ngamazwe amashishini ukuba sovavanyo zabo headquarters apho.
Ngenxa olomeleleyo urhwebo notyalo-mali amathuba, isixeko attracts yehlabathi entrepreneurs kwaye iinkokeli kwaye wenziwe ekuthiwa kakhulu competitive Asian lizwe ukuqala ishishini.
Kwi-New Zealand, incorporating kushishino kuthatha kuphela ngosuku, kwaye nokubhalisa a ipropati kungenziwa ngendlela ezimbini.
Kubasebenzi kukuba izakhono kwaye educated, kwaye basebenze iindleko primary school. Ngokomthetho iirhafu, kukho akukho payroll, ukhuseleko loluntu okanye ikomkhulu uzuza irhafu.
New Zealand, incinci njengoko kunjalo, sele imiselwe phezulu eziliqela ishishini structures: I-entrepreneur angafaka isicelo ukuba ibe sole trader abo isebenza kushishino nganye okanye, eziliqela umsebenzi wokufama imizi-mveliso, kusenokuba inxalenye a lwahlulelwano phakathi iingcali abaya kuxhamla lwe iindleko zokusebenza.
Omnye NZ ubume imisela phezulu limited eyimali iinkampani ukuba ingaba kwezabo isemthethweni qumrhu, ezahlukeneyo ukusuka shareholders. Kwaye kukho esidlangalaleni ezidweliswe iinkampani kwi-New Zealand Stock Exchange, ngokunjalo. Ke kubalulekile ukufunda malunga inyaniso kwaye kwindawo yentengiso xa kungena entsha, ilizwe okanye indawo. Ungajonga kwi-Manani Enew Zealand kuba yemakethi ukunceda gqiba ukuba ishishini lakho niche ngu ezilungele kuba Enew Zealand okanye hayi. Norway sele nomdla kuqoqosho, kwaye uninzi unxibelelwano kunye urhulumente kungenziwa digitally. Nokubhalisa a ipropati ngu ngokukhawuleza, kwaye ukuthobela irhafu imithetho ufumana i kakhulu. Egqiba insolvency kwi-Norway kanjalo low-iindleko, imirhumo kunye averaging omnye umbhali we-bankrupt yequmrhu ixabiso. Kukho downsides ukuba Norway, nangona kunjalo: Yokufumana ukwakhiwa amaphepha-mvume kusenokuba lengthy, kwaye basebenze imigaqo kusenokuba iselwa rigid. Anne Worsoe, umseki ka-Inguqulelo Indlu kwaye umlawuli we-Inguqulelo Norway, wathi,"Norway abaqondisi-mthetho"omnye eyona imiba ukwenza ushishino kwi-Norway waba yokuba"Norwegians eyaziwayo njengoko digitally ephambili kwaye kwangoko adopters, lizimisele kwaye nako ukuhlawula kuba iteknoloji entsha."Yena waya kwi zichaza ukuba isizwe boasts highly izakhono abasebenzi, iindidi njenge bolwazi, ezemali, uyilo kwaye nkqu umculo tech. Entrepreneurs kukho ukukelela-mveliso iinkalo zobuchule, abatyali-mali kwaye talent. Ngaphezulu, iteknoloji kwi-Norway kungasinceda ukuphuhlisa foreigners' ishishini models. Kwi-software udidi, yena cited inkampani ngokuba Ngaphantsi Yonke into, oko ngokuphonononga entrepreneurs ukwakha ngaphandle zabo software izimvo. Norway ke amashishini asekuhlaleni kanjalo ngokuphonononga langaphandle entrepreneurs isigqibo sokuba zeziphi iindidi ukuphonononga: Merch Informer inika merchants ulwazi kwi-zeziphi iimveliso ingaba ethandwa kakhulu kwaye niches ukuba abasebenzisi bamanzi ingaba uninzi anomdla. Kwinto yonke, wathi i-CEO kwaye umseki we Mums Ithetha Ishishini, abaye kanjalo wathetha kunye"Norway abaqondisi-mthetho", injongo ephambili akufuneki ukwenza ushishino kwi-Norway ziquka"ubutyebi, loqoqosho governmental uzinzo, kulungile-kwaphuhliswa unxibelelwano kwaye lezothutho infrastructures kwaye isizwe ke longstanding urhwebo ties kunye EU."Incorporating inkampani kwi-U.K. ngu zombini i-fast kwaye affordable, owenza ngayo omnye easiest iindawo Aseyurophu ukucwangcisa kwaye iqhube kushishino. Udavide, umseki ka-umncedisi esweni qala Umncedisi ubunzima-mthamo, wanika"Norway abaqondisi-mthetho"yezi zizathu zilandelayo kutheni Usa ngu elikhulu kwindawo ukwenza ushishino: Ezinye eyona iindawo ukuqala ishishini kwi-U.K. ziquka Derby, Stoke, Ebelfast, Stirling kwaye Durham. Kanye specifics ka-nokuqala ushishino ngendlela ethile lizwe ingaba ngokuqinisekileyo, ngokulawulwa town, kwisixeko, isimo okanye iphondo ukhetha ukwenza yakho kwiqumrhu. Abo specifics ingaba kukunceda kakhulu a kukufutshane jonga ukuba ukhe ubene ukucinga malunga nokuqala yakho entsha umbutho overseas.
Indlu Hunting. Norway
Ngenxa enzima iingxaki, izimvo ingaba ayifumaneki
Siphinda-ukusebenzela ulungise lo mba msinyane kangangoko kunokwenzekaUkuba unengxaki kakhulu enye ka-ingxelo kuthi, ungasoloko zifikelele newsroom nge Umfundi Embindini. ingaba kwi-Oslo West, ngomhla wendawo a peninsula kwi Oslofjord, apho"unako ukubona cruise iinqanawa kwaye boat traffic okokuba yi -"watsho umnini, Jonny Enger. U-bedroom, zintathu-bathroom apartment ngu kwi phezulu floor a ama-ibali building constructed ngo. Oko sele ezintathu balconies kwaye kophahla i-tetravex, umnikelo a imboniselo ka-Bygdoy Island kwi-umgama."Kukho windows konke jikelele, kwaye ezininzi ukukhanya kuza"Umnu Enger wathi.
Abalindi ngasesangweni ngu nge - hallway ezikhokelela i-vula abahlala isithuba.
Ekhohlo ngu ophilayo dining indawo kunye kudonga lwendlu floor ceil iifestile sliding glass doors ukuba ukuvula i-balcony. A emacala-mabini igesi fireplace inxenye abahlala isithuba kwi encinane, kwaye inkulu iindawo,"ngenxa libanzi, vula isithuba, unako ukubona fireplace nakweliphi ndawo"watsho Jan Fredrik Bonde, iqabane lakho kwi-real estate ifemi Sem Johnsen, apho ingaba ukwenza uluhlu kuba apartment. The name, ekhohlo labaphilayo indawo, ingaba i-island kunye igumbi ukuze sokugweba ezintathu, ngokunjalo Miele nezixhobo zasekhaya, isiko cabinetry ukusuka Poliform kwaye i-adjoining pantry newayini yokugcina closet. Zontathu bedrooms bamele ilungelo lokungena Umlawuli bedroom ubani ukuhamba-closet kwaye i-en-suite bathroom outfitted nge soaking tub, udonga-kwisakhelo bidet, phinda-phinda vanities, kabini imvula shawari, radiant floor heating kwaye Hansgrohe fixtures. U-le bedrooms, kuquka mfundisi, kuba glass doors ukuba vula ukuba balconies.
Buyers asingawo kufuneka hire a lawyer ukuvala kwi-propati
Libanzi-plank oak floors sebenzisa kulo lonke apartment, kwaye balconies kwaye kophahla i-tetravex zenzelwe i izihlambululo eyobuhlobo wood imveliso ngokuba apartment, nto leyo iza nababini parking izithuba kwi-garage, kwi-Tjuvholmen, fashionable neighborhood ukuba yi isihlanu -ngomzuzu hamba esuka restaurants, evenkileni, ifilim theater, i-bank kwaye pharmacy, Umnu Enger wathi. Downtown Oslo ufumana i ngomzuzu ukuhamba Ukuba olukhawulezayo turnover kwaye i-njengokukhapha ixabiso yandisa kusenokuba largely attributed ukuba yoluhlu lweempahla shortage kwaye abancinane ezintsha zophuhliso, ingakumbi kwi-Oslo West, ngokunjalo low inzala amazinga, wathi Vemund Thorkildsen, iqabane lakho kwi-Oslo real estate-arhente Norway sele nomdla kuqoqosho, kunye kakhulu yayo ingeniso derived kwi-oli kunye igesi yendalo, kwaye recovered ngokukhawuleza kwi- global-mali bunzima, agents wathi. Ukususela ngoko, izindlu amaxabiso kuba steadily ukwanda, wathi Carl Geving, oyintloko sesigqeba somgaqo-Emva izindlu afumaneka kwi-Norway ukwanda nge-ishumi elinesithathu ipesenti ngo- kwaye nkqu ngaphezulu kwi-Oslo, apho"sino i-extreme kwimakethi apho amaxabiso ukwanda amabini anesithathu ipesenti"watsho Christian Vammervold Dreyer, oyintloko oluphezulu ngojanuwari ka-"urhulumente tightened iibhanki' nako ukunika yemali-mboleko yakho yakwa"Umnu Dreyer wathi, capping kwabo ngomhla ezintlanu uphinda-phinda borrower ke ingeniso. Ngenxa yoko, yentengiso cooled kwaye izindlu amaxabiso wawa mbombo zone zeli. Oku kwaba ingakumbi ngoko ke kwi-Oslo, wathi, noting ukuba"waba weakest unyaka kwi-isithai izindlu kwimakethi ukususela kunyaka-mali mbhodamo ukuwa waba strongest kwi-Oslo, kunye nciphisa. zintlanu ipesenti."Ukususela ekuqalekeni, nangona kunjalo, amaxabiso mbombo zone zeli kuba stabilized kwaye ingaba ayisasebenzi declining, agents yathi."Kwikota yokuqala, sino enkulu ukwanda Oslo izindlu amaxabiso"Umnu Dreyer wathi, central bank ka-Norway, sele signaled ukuba inzala yezavenge izindlu iimali-mboleko iza kuba wavusa, kwaye entsha izindlu ukwakhiwa kulindeleke"Umnu Geving yathi."Kukho uncertainty malunga njani kakhulu ezi imibandela iza kuchaphazela izindlu amaxabiso kulo nyaka."Kweyokwindla, i-avareji ixabiso ngamnye isikwere futhi kwinani Norway wayesele, kroner (dollazi), wathi, kwaye Oslo malunga, kroner (okanye dollazi). Uninzi buyers ingaba isithai abemi, nangona inani langaphandle buyers wenziwe ukwanda kwiminyaka yakutsha nje, Umnu Geving wathi, kunye uninzi esiza ukusuka wayalela amazwe okanye Entshona Yurophu."High-end iimpahla ingaba practically zonke bought yi-Norwegians abakhoyo Oslo abahlali okanye ingaba babuyela isixeko emva isebenza ngaphesheya"Umnu Bonde wathi. Kukho akukho izithintelo kwi langaphandle buyers, kwaye foreigners unako ukufumana mortgages ukusuka isithai iibhanki. Kodwa umthengi kufuneka ufumane i no ka-a-arhente Yokhuseleko Lwezentlalo inani, eyaziwa njenge - broker ngu hired yi-nomthengisi bafanele ukubonisa, kodwa usebenza njengokuba middleman phakathi umthengi nomthengisi bafanele ukubonisa, esebenza egameni omabini amaqela, Umnu Thorkildsen wathi. Brokers' imirhumo vary yi-ipropati nomthengisi bafanele ukubonisa akahlawuli i-broker ke imali, nto leyo ibandakanya lentengiso inkcitho, Umnu Bonde wathi, kwaye ngu. amashumi amabini anesihlanu ipesenti ye-ziyathengiswa ixabiso kuba oku ekhaya.
E-ukuvala, buyers ahlawule urhulumente uxwebhu imali. zintlanu ipesenti ye-ziyathengiswa kwexabiso Kuba olu phawu, uxwebhu umrhumo uya kuba malunga ne, kroner (okanye dollazi), Umnu Bonde uqikelelo.
Ipropati iirhafu kule apartment baba, asibhozo kroner (malunga dollazi) yekota yokuqala ka. Isondlo imirhumo ingaba, ku- kroner (malunga dollazi) ngenyanga.
Abantu ababini zifunyenweyo abafileyo kwi-i-apartment kwi-Oslo - Norway Namhlanje
Abantu ababini baba zifunyenweyo abafileyo kwi-i-apartment kwi-Oslo isixeko embindini IcelandSenegal kwaye Norway kokuba ephezulu amaxabiso Aseyurophu kwi-according kwi-European bethenga amandla uphando Ihungary kwaye Emntla Makedoni ngabona cheapest.
Enew York City Zasekuhlaleni Inkundla
Jonga Iindawo ukufunda apho ukuya kwi yakho khawunti
I-inquest yi kokuva ngenjongo isigqibo isixa-mali umonakalo othe ngenxa kwi ibango
E-i-inquest, kuphela plaintiff ikhona ngenxa yokuba defendant uye wasilela ukuphendula okanye kuvela senzo.
Ngomhla inquest, plaintiff kufuneka kuvavanya i-allegations zenziwe kwi-isikhalazo kwi-satisfaction ka-Umgwebi. Ukuba ufaka nto ngokwakho kwaye kufuneka kuqaliswe isenzo, kodwa abanalo wafumana impendulo evela defendant kwaye defendant ke, ixesha impendulo iphelelwe lixesha, ungacela ukuba inkundla bamba i-inquest kwindlela yakho amabango. I-inquest ayisayi kubanjwa ngaphandle kokuba defendant ke ixesha ukuphendula iphelelwe lixesha. Ukuba defendant waye wasebenza yi-isandla kweenkonzo, defendant sele amabini kwiintsuku ifayile impendulo. Ukuba defendant waye wasebenza zezinye kwe-isandla kweenkonzo, defendant sele kwiintsuku ezingamashumi amathathu ukuphendula ekuqaleni ukususela kwixesha plaintiff iifayile i-efungelweyo inkonzo ye-summons kwaye isikhalazo kunye inkundla. I-inquest uza kanjalo hayi kubanjwa kwilixa ezama intlawulo qho ityala ngaphandle kokuba kufuneka uthumele defendant ezongezelelweyo isaziso intshukumo. Ikopi summons kwaye isikhalazo kufuneka mailed ukuba defendant kwi-i-imvulophu iphawulwe Personal kwaye Ziyimfihlo ubuncinane amabini imihla phambi kokuba ingeniso a isihlalo. I-imvulophu akavumelekanga ukuba abonise ukuba yethutyana isenzo ngokuchasene defendant. Kuya kufuneka uzalise efungelweyo inkonzo kuba ezongezelelweyo luhlu kwaye yizise nawe ukuya inquest. Ukuba sele defendant ayiphumelelanga ngokufaneleka impendulo, kwaye akunazo umtshutshisi, ungacela i-inquest yi-ukuzalisa ngaphandle i-Inquest Yesicelo kwaye filing nge inkundla kwi-khawunti apho kuwe ezenziwe sesi sibini i-summons, okanye nibe yiya Inquest Yesicelo ukuba afake isicelo sakho nge-imeyili ngqo Enkundleni. Ukuba ngaba isicelo i-Inquest nge-imeyili, uza kwaziswa nge-imeyili wenkundla umhla. Xa uqinisekile ukuba awuqinisekanga nokuba i-defendant uye wasilela ukuphendula, unga khangela kunye clerk ngu-ofisi.
Kwi inkundla umhla, qiniseka ukuba safika phambi kwexesha ngoko ke ukuba uza kuba ixesha ukufumana ngokusebenzisa kukutshisa detectors.
Yiya courtroom kwaye nimamele kuba igama lakho ngokuba kwi khalenda kwaye impendulo ilungile xa ufuna ukuva igama lakho. Xa sihamba phambi komgwebi kuya kufuneka ukuba unike ubungqina njengoko inyaniso ye-allegations kwi-isikhalazo njengoko ubuya e a linge. Umzekelo, ukuba ufuna ezama aukubuyisela a isixa imali ukuba uphelelwe owed kufuneka bonisa ukuba defendant inoxanduva ityala kwaye njani ityala waba ezithe. Ukwenza oku, nibe angenise kwi ubungqina i-IOU ukususela defendant kwaye kungqina ukuba imali alifumanisanga ibe ihlawulwe umva. Qiniseka ukuba azise zonke yakho ubungqina kwaye amangqina ukuba inkundla ukuba kuvavanya yakho amabango. Ukufunda ngakumbi, yiya 'Njani Zama okanye Ikhusele a Zasekuhlaleni Meko Xa akunyanzelekanga a Lawyer, kwaye ukufunda yovavanyo candelo. Emva inquest, inkundla iza kwenza isigqibo kwaye ngqo a isihlalo esekelwe phezu ubungqina zichaziwe. Inkundla ingayalela kweelwimi a isihlalo abaxhasayo ye-plaintiff. Isihlalo babe ngqo intlawulo i-mali isixa-mali okanye babe ngqo ukuba into kwenziwa ngo zamaqela. Ukuba umgwebo wanika emva inquest, plaintiff kufuneka ucele clerk ukuba ingaba isihlalo na ukuze ukuqala enforcing isihlalo. Kubalulekile ukumbule ukuba ubungqina kwi-i-inquest usesinye ayingenisileyo, inkundla ngaphandle kwelinye icala ekubeni nako injongo yalo inyaniso. Ukuba, emva umgwebo na, defendant kukuba nako ukubonisa ngokuthi kuthethwa ka-isindululo okanye umyalelo ukubonisa kubangela ukuba default yaba ngaphaya yakhe okanye yakhe ulawulo kwaye ukuba kukho okulungileyo nkqo ekukhuseleni ilungelo ukuba intshukumo, inkundla ingayalela vacate isihlalo, buyisela ityala kwi khalenda kwaye kuvumela yovavanyo kwi merits. Yiya Vacating a Isihlalo uvela le nkqubo.
Asylum Seekers kwi-Norway Kufuneka Ukwazi nge dollazi Ngenyanga imali evunyelweyo
kwaye wabelane amagumbi e-Ila uhlalutyo reception
Colombia wenziwe i-asylum seeker kuba unyaka omnye ezintlanu iinyanga Norway kwaye ubomi e-Ila uhlalutyo reception kwi-OsloYena izahlulo amagumbi ezimbini kunye nezinye abafazi ukusuka ku - I musa ukwenza uhlahlo lwabiwo-mali, kodwa prioritizes kwi hlobo: ukutya, soap, prepaid ikhadi kwimfonomfono kwaye ukuba kukho nantoni na ekhohlo phezu. Kodwa kuyanqaphazekaarely ugcina imali ngaphezu ukutya, yena utshilo.
Leila sele onayo imvana inyama ukusuka relatives kwisixeko abo baya share kuba sangokuhlwa.
Low abahlala amazinga kuba asylum seekers ingaba ilungelelaniswe yi-immigration-nkqubo considerations kwaye ukuba imali kuba yethutyana xesha."Ingxaki kukuba xa asylum seekers ukuhlala ixesha elide phambi kokuba ityala ubizwa zacaciswa. A nje Fafo uphando lubonisa ukuba inani leentsuku wachitha kwi asylum reception waba iintsuku kuba abantu abahlala ngowama- - kuba omnye kunye necala eminyaka. Kubalulekile olahlekisayo ukukholelwa ukuba inkxaso kuba ubomi expectancy phephamvume elifutshane ngokwe xesha. Mna yiba soloko nqa njani ukwenza oko kwenzeka"utshilo wafumana Marie Louise Seeberg ngomhla isithai Research Institute of nentlalo-ntle, NOVA, Oslo Ngezifundo College kwaye Akershus. Yena usebenza kwi elinolwazi inqaku kwi akufuneki asylum seekers kwaye umbonileyo ubungakanani izixa-mali iminyaka eliqela. Amazinga baba lowered kunye migration mbhodamo kwi-ekwindla Ngowama.
Vula bakery inika kwabo isonka e ukuvala ixesha
Emva koko, amazinga kuba kuphela. Kuba omnye ngabantu abadala, isixa-mali imali ingaba sika nge kwikota ukusukela ngowama, oko kuthetha dollazi ngaphantsi ngenyanga."Kuba omnye asylum seekers, amazinga bamele kanjalo thoba ngoku kunokuba baba, xa onayo, kokukhona nganye dollar"utshilo Seeberg. UPHANDO: Marie Louise Seeberg ngomhla isithai Research Institute ye-ntlalo-ntle Uphando NOVA, Oslo Ngezifundo College kwaye Akershus, ibiza kuba ngxoxo-mpikiswano ngokuhlawula amakhadi."Kufuneka sibe rhoqo khetha cheapest bonke. Zininzi izinto kunye nemigaqo yokusebenzisa imichiza kwi-stores, kodwa mna awunakuba khetha umgangatho, ndiza nje ukhangela kwi kwexabiso. Ndibathanda Kuqala Kwexabiso Khangela apha, ikofu, soap, yonke into Yokuqala Kwexabiso.
Khaled exclaims, kunye nezinye ezimbini abafazi egumbini eagerly chonga phezulu iimveliso ngeli lixa ncuma.
Ngamanye amaxesha, charitable organizations khulula ukutya ngexesha reception. Kwangoko yahlula phakathi floors ye-reception ngoko ke ukuba akukho ungquzulwano. Akukho Xa thina sebenzisa ngaphandle kwemali, thina ukuboleka ukusuka ngamnye enye. Kwaye abanye ukufumana uncedo oluvela relatives abahlala Norway, uthi Khaled. Yena kufuneka soap kwaye uyaya ngaphandle hallway ukuhlamba yakhe izandla phambi emini emaqanda, ke yena carries i-dispenser umva. Ukuba kunzima emi yi-sink, yena uyayazi kuya utyibiliko. Khaled uqala ngaphandle ibhokisi ka-imvana ukudla ngexesha spicy sauce ukususela ifriji. Yena sele relatives abo anike yakhe kunye isidlo sasemini. Yena nkqu affords intlanzi okanye inyama kanye ngenyanga kwaye idla eats imifuno kuba sangokuhlwa.
Yena stretches kuba umntu oqhuba bag ka-isonka kwaye lunika.
I-Eritrean homemade isonka ngu njengoko ibhityile njengoko pancakes, kwaye pile isekho kuba kwiintsuku ezintlanu. shiya kuye, kwaye Leila Khaled iyahlala yedwa egumbini. Yena sighs, lowers yakhe shoulders kwaye uthi ke demanding kunye wood lwe amagumbi."Ke nzima ukufunda kwaye concentrate, ngenxa yokuba abantu yiya kwi-kwaye ngaphandle lonke ixesha. Ndiyazi ukuba abantu Oslo ukuba ndinga kuba besiya.
Kodwa ndinako nokushukuma ngaphandle reception.
Ke mna kuphulukana nayo imali. ZITHENGISWE MENS: Yared Russom amachaphaza kwentloko yakhe ukuya abafazi kwaye uthi yena ke, belambile. Leila Khaled (fv), Tsega Kidane, Winta Andebrhna kwaye Semhar Hagos kumnika Eritrean isonka.
Imali - asylum seekers get ngu-oza-phantsi yonke into kodwa iindleko ophilayo, kwaye umthetho ongundoqo: Abantwana ngocoselelo ngcono kunokuba ngabantu abadala, kwaye abo kunye uthabatha izigqibo get ngaphantsi abanye.
Amazinga vary ngokunxulumene isimo kwi-asylum kunjalo, uhlobo reception, ubudala kwaye usapho iqela leenkwenkwezi. Ukongeza, kukho schemes ukuba vumela kuba inkxaso ye-ukuhamba inkcitho, kindergarten kwaye esikolweni izixhobo okanye funeral ezingahlawulwayo. Abanye receptions kanjalo kuba imbiza imali kuba imisebenzi, kodwa i-guquko lomdlalo enkulu. Jon Ole Martinsen, yabalawuli consultant e NOAS, isinorwegian asylum seekers umbutho, iyavuma ukuba subsistence amazinga kuba asylum seekers abanalo ukuba eyona nto indawo ugqaliso kuba umbutho. Ngaphambi koko kulo nyaka, baya? enazithabathayo imfuneko ukwandisa ezisisiseko inkxaso kwaye ingakumbi kuba iintsapho kunye nabantwana. Akukho ezicetywayo tshintsha esi kwi-kunyaka olandelayo ke urhulumente lwabiwo-mali."Siya kunika rice ukuba eyakho emva ngokunika ngoko ke abancinane. Ukuba baye bazive ifayile ezingasafunwayo okanye ngaphaya, sisebenzisa ukwandisa uhlalutyo nkqubo, athi.
Kuba ngabo kumaqhosha uhlalutyo reception, amakhadi ingaba uninzi kusenokwenzeka ukuba abe kweli lizwe.
Khaled uya isithai izifundo iintsuku ezintathu ngeveki kwaye lithatha inxaxheba imisebenzi. Yena ufumana ibhasi ikhadi ukususela reception, kwaye abantu bamncedise zikhathalele izinto yena akanalo ukuhlawulela.
Khaled sele ezimbini younger oodade kwi-Colombia, kwaye kubalulekile kuba wakhe ukuba kufuneka uqhagamshelane kunye nabo, ingakumbi emva kokuba umama wafa kunyaka ophelileyo.
Oko iindleko amahlanu dollazi ukuthetha kuba imizuzu engamashumi amabini. Yena ingaba oko kabini ngeveki.
Colombia akanalo internet ke yena awunakuba sebenzisa i-Skype.
- Hayi, kodwa ndiyazi malunga abanye ngomhla reception ukuba minimizes ntoni bona ngokwabo sebenzisa ukunceda amalungu osapho. Umntu othile apha ingaba usapho kwi phumeza, abo wenziwe hijacked yi-smugglers kwaye icinezelwe kuba imali. Umntu konga imali ukuze uqiniseke ukuba banako ukunceda enjalo kwiimeko. Abanye kuba kanjalo ihlawulwe ezininzi imali kwenzeka Norway kwaye ukuchitha imali baya kufumana nyanga nganye ukuba lihlawule ityala. Kukho-hluke kakhulu stories apha, uthi Khaled.
Ube unelungelo lokuba pregnancy inzuzo xa ufunaPregnant
Kwaye umsebenzi wakho ayikwazi entail umngcipheko injury yakho unborn umntwana
Isithai Iifayile Isikhalazo ngokuchasene SAS - Nordic Iphepha
Isithai yolawulo criticizes SAS ekubeni 'i-akulunganga competitive luncedo"ngenxa yokuba ubani Scandinavian zokusebenza mvume, ngexesha labo inkampani sele kuphela isithai mvume. I-newspaper iingxelo isithai ulawulo sele wachitha impela-veki. i isikhalazo kwi-EU kwaye EFTA Umlo Igunya, ESA Isithai uzamile ukufikelela ngokufanayo Scandinavian msebenzi mvume iminyaka eliqela, nto leyo ibisoloko specially adapted kuba competitor SASI-scheme yenza SAS ukusa aircraft kwaye crew phakathi amazwe ngaphandle hindrance kwaye yenza lula ukufumana uhambo sivumelwano kunye amazwe kwezinye continents. Kwesinye isandla, isinorwegian ubani isithai sephepha-mvume nabalandeli kwezixhobo zokusebenza, ngokunxulumene Davens Ninlil.
Njani Ukubuyisela a Ezilahlekileyo North Carolina Umqhubi ke, iphepha-mvume
I-North Carolina ukwahlulwa kwezithuthi (DMV) recommends ukutshintshwa a ezilahlekileyo North Carolina sephepha-mvume, imvume, okanye isazisi (ID) ikhadi msinyane kangangoko kunokwenzekaNgaphandle kwezi amaxwebhu, awunokwazi ngokusemthethweni drive kwaye kuza kuba nzima ngakumbi ixesha ekuboneleleni photo uchazo. North Carolina akuthethi ukuba zifuna ukuba ingxelo a ezilahlekileyo okanye ngamaphepha umqhubi ke sephepha-mvume ukuba komthetho, kodwa DMV ndivuma kakhulu recommends kuyo. Ukwenza njalo, qhagamshelana yengingqi yakho DMV-ofisi yakho yobulali amapolisa sovavanyo ukuba iquke zonke yakho bases kwaye qiniseka ukuba ukhe ubene ezikhuselweyo ngokuchasene naziphi na fraudulent umsebenzi. Ukuba ungathanda ukubhala iphepha-mvume lakho yi-ukuhlaziya i-Real-ID, ngoko ke kuya kufuneka azise ubungqina yakho: I-North Carolina DMV iwebhusayithi sele epheleleyo uluhlu owamkelekileyo amaxwebhu nganye yokuba zilawulwe xa uqinisekile ukuba awuqinisekanga yintoni ukuzisa. I-NC DMV iarhente uza kuthabatha umboniso wakho yethutyana mvume uza kufumana yakho osisigxina phinda-phinda sephepha-mvume nge-imeyili. (Bona ngezantsi yethutyana mvume ulwazi.) Yi-North Carolina umthetho, kufuneka ukutshintsha igama lakho kunye Yokhuseleko Lwezentlalo Yolawulo phambi kokuba ufake isicelo sephepha-mvume phinda-phinda yephepha-mvume. I-NC DMV recommends lokulinda ubuncinane amathathu anesithandathu iiyure emva kokuba ndwendwela i-SSA phambi nokufaka phinda-phinda. North Carolina ke umntu DMV ofisi ayisasebenzi mba umqhubi licenses ngoko nangoko abo nokufaka isicelo kulo mntu. NC ngoku imiba osisigxina umqhubi licenses kwi-central kwi-ofisi Raleigh Oku akuthethi ukuba kuchaphazela indlela ufaka isicelo sephepha-mvume kuqala-ixesha umqhubi sephepha-mvume OKANYE njani isicelo sesibonelelo phinda-phinda yephepha-mvume. Lo mgaqo-nkqubo kuphela ichaphazela indlela ende kuthatha ukuba afumane i-driver yakho ngu yephepha-mvume. Emva kokuba isicelo sakho phinda-phinda sephepha-mvume, uza kufumana Yethutyana Lakho, Isiqinisekiso (TDC) ngoko nangoko. I-TDC siyasebenza kuba amabini imihla, kwaye kufanele ufumane yakho osisigxina umqhubi sephepha-mvume nge-imeyili ngaphakathi amabini imihla. I-NC DMV asserts uninzi abaqhubi umfanekiso kufumana zabo osisigxina licenses ngaphakathi amabini imihla. Ukuba ufuna musa kuyifumana kwi ngokufaneleka uhlobo, nceda unxulumano lwefowuni yakho yobulali DMV-ofisi. Uza kufumana yakho osisigxina septemba sephepha-mvume nge-imeyili ngaphakathi amabini imihla. Ukuba ufuna musa kuyifumana ngaphakathi amabini imihla, DMV recommends nayo nabo ngokuthi: uyakwazi buyisela a ezilahlekileyo North Carolina sephepha-mvume ngexesha ngaphandle karhulumente okanye kwi military ulwabiwo-intanethi njengoko ixesha elide njengoko kufuneka ahlangane efanayo nkqubo njengoko ezidweliswe ngasentla. (Bona"Buyisela Yakho Ezilahlekileyo okanye Ngamaphepha NC sephepha-mvume, Imvume, okanye i-ID' ngaphezu ukufunda njani isicelo kwi-intanethi.) Zethu Nokuhlaziya Yakho Isifundo kwi-North Carolina icandelo sichaza indlela military amalungu unako uhlaziye nge-imeyili. Uyakwazi indawo yakho abarhwebayo umqhubi ke, iphepha-mvume (CDL) umntu okanye kwi-intanethi. Nibe indawo yakho CDL-intanethi ukuba akunazo yokusasaza ngeenjongo zokurhweba umqhubi sephepha-mvume kunye a P okanye S endorsement. CDL ke, kunye P okanye S endorsement unako kuphela buyiselwa kuyo umntu Isicelo kwi-intanethi, sebenzisa inkqubo efanayo njengoko wachaza ngasentla"Buyisela Yakho Ezilahlekileyo okanye Ngamaphepha NC sephepha-mvume, Imvume, okanye i-ID. QAPHELA: kufuneka anike zonyango examiner ke isiqinisekiso ukuba unayo i-non-excepted interstate iziqinisekiso.
Ukuba ufuna ntoni, qhagamshelana yengingqi yakho DMV-ofisi kuqala ukuze ufumanise ukuba ukhe ubene eligible isicelo kwi-intanethi.
Ukuba isicelo sakho septemba CDL kwi-umntu, kulandela enye inkqubo njengoko kuchazwe ngasentla phantsi"Buyisela Yakho Ezilahlekileyo okanye Ngamaphepha NC sephepha-mvume, Imvume, okanye i-ID, kodwa kanjalo.
Omtsha ubhaliso isivumelwano zexesha elizayo ukwakhiwa ngowe-Norway - isithai Maritime Igunya
Kukho akukho iimfuno ukuba umnini ke nationality
Shipbuilding izivumelwano zexesha elizayo ukwakhiwa kunye isithai yard zibe bangena eyahlukileyo iyunithi ye-NOR: Shipbuilding UbhaliseUqikelelo ubude esonyuliweyo kufuneka ishumi meters okanye ngaphezulu, ref.
i-isithai Maritime-Code of amabini anesine June oyinombolo yama- S.
Uxwebhu iimfuno sokubhalisa kunye Shipbuilding Bhalisa ingaba kuchazwe ngezantsi.
I-hull inani zidibene kunye igama iqumrhu yard ingaba eyodwa uchazo yobhaliso. Kubalulekile, ke ngoko, utmost ukubaluleka ukuba wonke yelenqe ngu bangena zonke izaziso kwaye amaxwebhu. Ukuze ukunqanda delays kwi-inkqubo yobhaliso, thina kindly buza kuba zonke iifomu kufuneka ngokupheleleyo wazaliswa. Ngokufanelekileyo, langaphandle umntu okanye iqumrhu zibe ebhalisiweyo njengoko umnini kwi-Shipbuilding Ubhalise.
Kanye ubhaliso sigqityiwe, oku kuya kuba babuyele umthumeli
Kuba ubhaliso a shipbuilding isivumelwano zexesha elizayo building kwi-Norway: phawula ngaphandle kuba enye II kwi saziso. Ebhalisiweyo umnini ngexesha ukwakhiwa ixesha icacisiwe kwi-isaziso ifomu. Kubalulekile, ke ngoko, kubalulekile ukuba onke amaqela (kwisalathisi - ukukhupha iqela - umnini) umqondiso lwesicelo kunye bophelela utyikityo. Kuba iinkampani: ngokunxulumene isiqinisekiso inkampani ubhaliso. I-esayiniweyo ifomu kukuba kuthunyelwa i-imeyili Ukususela ngumsebenzi isivumelwano oko kukuthi ekubeni ebhalisiweyo, yokuqala kufuneka kugqithiselwa Isebe Inqanawe Ubhaliso. I-ezithengiweyo ezirhafelwayo ziya kuthunyelwa ngaphandle emva kokuba ubhaliso ithathe indawo. Ukuqinisekisa echanekileyo invoicing thina kindly buza lomamkeli ukugcwalisa ifomu intlawulo ulwazi, KR- kwaye phambili esayiniweyo ifomu kwi-imeyili. Ukongeza, kuya kubakho ibe igcwalisiwe ikhona imali amazinga kwaye iiyure amazinga enxulumene lokuqala-kwaye imirhumo yonyaka ngokusekelwe esonyuliweyo u-ubude - NET ngokunjalo nezinye, efunekayo (umzekelo xesha lokuzihlanganisela izicelo kwaye ezithile iziqinisekiso) ref.
Ngamazwe Mvume Lokuqhuba
Ingaba ukhangela yokufumana phandle ukuba ulwazi oluninzi malunga neLokuqhubaNgokusemthethweni kwi-Norway? Ukufumana phandle njani ukufumana yakho Ngamazwe mvume lokuqhuba kwi-Norway apha.
European Ishishini Bhalisa - Norway
I-Brønnøysund Bhalisa Iziko ufumana i-government-arhente yolawulo eliphathiswe inani wesizweEzigunyazisiweyoZengxelo kwaye ubhaliso schemes kuba ishishini noshishino. Eyona nto enye ufumana i-Bhalisa Ishishini Yamafama. Uzakufumana kuyo nge-EBR Zonke EBR ulwazi ummandla wentengiso okufutshane kuye anike ngqo kwi-intanethi ukufikelela isithai inkampani ulwazi.
Banking Umthetho kwi-Norway
imiselwe ukuze kuqinisekiswe consumer protection kwaye inciphise loluntu inefficiencies ye-banking kwimakethi yindlela ukunqanda mbhodamo kwaye inciphise yayo yonke imingcipheko kuba iinkampani ngokunjalo umntu abantu Ezi zinto zilandelayo uluhlu ibonelela kuwe engundoqo kwaye enze imali idiphozithi kunye omnye wobulali iibhanki, ufuna ukwaziswa ngenye indlela kwi-imo ye-inshorensi-nkqubo kuba deposited imali yamafama
Mali Supervisory igunya Norway ('FSaN') ingaba ezigunyazisiweyo zengxelo umzimba kuyo imiba kwezezimali esweni okulungileyo nokusebenza kakuhle kwamacandelo yentengiso.
jonga obligation le bank ukugcina ubuncinane isibhozo le iyonke imali deposited nge inkampani, ngoko ke, ukuba kunokwenzeka ezikhoyo kwimeko umngcipheko. Umngcipheko sethutyana kutsho kwi-ezintathu kusenokuba ngokongezelelweyo ezifunekayo kule meko-mandla cinga enjalo komlinganiselo ukuba kuba yimfuneko Kwi-Norway, ngamnye bank ngu obliged ukuba abe lilungu Iibhanki' Isiqinisekiso, ingxowa-Mali, ingxowa-mali nto financed ngokusebenzisa imirhumo ihlawulwe yi-mna ke kakhulu pleased yi-bam isebenzisana isemthethweni iqela ku -"abaqondisi-mthetho. Baya kuphethwe yonke inkqubo yokufunda a isebe i-ofisi kwi-Norway kuba omnye wam abaxhasi.
Umamkeli Isampuli kuba Seafood Restaurant
Fumana olu ukuba unayo sele ifakiwe IMFE, kodwa ingaba ikhangela ezongezelelweyo customized izikhokelo. Sebenzisa oku kokuba zifunyenwe isampuli kwi-Excel spreadsheet ifomati njengoko yakho restaurant kokuba zifunyenwe ngokubanziLomzekelo ungenanto ukutya oyilwayo isikhokelo imisebenzi nanye uphawu lwamanzi ukuzaliswa seafood kwaye tableware. Oku ukutya oyilwayo kokuba zifunyenwe isikhokelo ngu wadala ngokusekelwe c Restaurant Dining ezithengiweyo ezirhafelwayo Isikhokelo (VAT). Njenge yoqobo uyilo, lo mfanekiso ibandakanya 'Table kwaye 'Umncedisi imihlaba ukuba ingaba kuluncedo kuba dinning kwi-restaurant 'umthetho Oyilwayo Ukuze' icandelo luquka 'Idilesi' entsimini, ukongeza 'Umthengi Igama' entsimini, ngoko ke lo mthetho usayilwayo ifomati ayikwazi kanjalo kusetyenziswa kuba takeaways. Ngokungafaniyo ne - c hotel kokuba zifunyenwe template, oku ubume yenzelwe ngokukodwa kuba restaurants akusebenzi kuquka iindawo kuba amagumbi. Namhlanje electronical eyilwayo yemali ebolekiweyo widely olwamkelekileyo.
Ungadibanisa i-i-paypal intlawulo iqhosha yakho receipts kwaye imithetho eyilwayo ngokusebenzisa ezithengiweyo ezirhafelwayo Umphathi ye-Excel (umzekelo Efanayo ezithengiweyo ezirhafelwayo Software). Lo mfanekiso misela irhafu igama '- VAT' Uyakwazi lula tshintsha esi balandele amanyathelo ngezantsi ukuba ezithengiweyo ezirhafelwayo Umphathi ye-Excel (umzekelo Efanayo ezithengiweyo ezirhafelwayo Software) sele kwindlela yakho (ezithengiweyo ezirhafelwayo Umphathi ye-Excel (umzekelo Efanayo ezithengiweyo ezirhafelwayo Software) ifuna kwi-Windows XP, nge-Excel - Ofisi ukusuka kwi- kwaye kamva).
Kunye ezithengiweyo ezirhafelwayo Umphathi ye-Excel (umzekelo Efanayo ezithengiweyo ezirhafelwayo Software) kufakelwe, umamkeli isikhokelo kuba restaurant kanjalo unako ukwenza kokuba zifunyenwe amanani ngokuzenzekelayo. Oku auto-ukufaka amanani msebenzi (cofa ukubona ngaphezulu ixabiso) esekelwe isibali ezigcinwe kwi-esemva Ukufikelela database.
Ngokusebenzisa le isibali, entsha, elijikelezayo kwaye eyodwa kokuba zifunyenwe ngu generated nanini na xa unqakraza 'Ukugcina DB'.
Imibuzo kwi-Bank Uxolelwaniso Statement
Registréierung vun Immobilien